I-PCB yakho ye-turnkey kunye ne-Assembly kwi-China-Kingford
Amava endibano ye-PCB ethembekileyo ngaphezulu kweminyaka engama-20.
Isisombululo sokumisa esinye se-OEM, i-PCBA kunye ne-Turnkey Assembly
Fast Prototype Assembly PCB ngaphakathi 7days
Imigca emi-6 ye-Yamaha SMT + 2 ye-Thru-Hole Assembly lines
Amava athembekileyo aneminyaka engaphezu kwama-20.
Umxube ophezulu, Umgangatho ophantsi we-PCB ukuya kuma-60 Layers
Maleko Multi, HDI, Microwave, Metal Core PCB
Izatifikethi zoMgangatho kunye ne-ISO 13485 kunye ne-IATF 16949
Ikhonkco ledatha kunye nabathengisi abasemagunyeni abangama-1000 +
I-100% yoqobo entsha kunye nokulandeleka
Ukufezekisa izinto ezingama-5,000,000 +
Uvavanyo olungenayo olungenamandla kunye nolawulo lomgangatho
Inkqubo ekrelekrele yeSisombululo se-3D DFA / DFM
Imizuzu emi-3 ichonga imiba kwi-PCBA ngaphambi kweMveliso.
Ukubonelela ngeeNgxelo eziDibeneyo ze-3D DFA / DFM
Inkxaso yeCAD / Gerber Data Source
Uyilo kunye nokubonelela ngovavanyo oluzenzekelayo lwejig / izixhobo
Ukuhlolwa kwe-AOI, ukuhlolwa kwe-X-ray, ukuvavanywa kwe-ICT,
Uvavanyo lwe-FCT, uvavanyo lokutshisa "
Ingxelo yokuvavanya kunye neziphumo ziyalandeleka
Iinjineli ezingama-30 nangaphezulu zoLungiselelo lwePCB
Ubume beMax No. 40, Isantya soMqondiso kaMax: 56G
Isithuba esincinci se-BGA PIN: 0.3mm, Min L / S: 3 / 3mils
Ubungakanani bePin Pin: 160000+, iMax BGA yangaphakathi: 60+
Shenzhen KINGFORD TEKNOLOJI CO., LIMITED lishishini eliphezulu-zobugcisa kunye PCBA ekrelekrele lemveliso yokuqhelanisa, ngokubonelela uyilo PCB, imveliso, kunye namacandelo ekuthengeni njengenkonzo abangabancedani kubathengi bethu. Uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwe-PCBA yokuqala yokucofa inkqubo yeekowuteshini ekrelekrele enokugqitywa ngemizuzwana eyi-10 ye-PCB, i-BOM, imirhumo yokuqhubekeka, isityalo esihambelanayo kunye nesibonelelo sokubonelela, ukufezekisa uku-odola ngokukhawuleza kwimizuzu emi-3, kunye nee-1-2 iiveki yokuhanjiswa okukhawulezayo.
● Amava athenjiweyo ngaphezulu kweminyaka engama-20.
● Yiba nenkqubo ye-DFM ehlakaniphile yokunciphisa amaxesha eprototype kunye nokwandisa ukusebenza kweR & D.
● Inkonzo yokumisa enye, ukuThengiswa kwePCB kunye neNdibano, ukuThengiswa kweeMpahla, inkqubo ye-IC kunye nenkonzo yokuVavanya.
● Akukho sicelo se-MOQ, Gxila kuMxube oPhakamileyo, kumthamo ophantsi naphakathi.
● Ukubonelela ngeyure ezingama-24 kwinkonzo yefowuni.
● Inkonzo yesampulu ingaphakathi kweentsuku ezisi-7 zokusebenza!
● 2018 -Ukuvulwa kwe-Shenzhen PCBA kunye ne-Turnkey mveliso wokuvelisa.
● 2016 -Ukuvulwa kweHubei PCBA kunye nomzi mveliso weTurnkey.
● Ngo-2012-Ukwandisa ishishini kwi-PCBA nakwi-Turnkey.
● 2009 -Ukuvulwa kwefektri yomenzi we-pcb ye-Meizhou aluminium.
● 2005 -Ukufezekiswa kweziQinisekiso ze-IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001, UL ， IPC.
● 2004 -Ukuvulwa komzi-mveliso waseKingford PCB- (Well-tech) eHuizhou.
● Ngo-1999 — Yasekwa iKingford Technology.
Umgangatho yenye yezinto eziphambili kuthi.
Ulawulo olungqongqo ngokungqinelana nemigangatho ye-IPC yokuqinisekisa i-100% yenqanaba elifanelekileyo lomgangatho wokuhambisa.
Ul (E352816) Ilungu le-IPC
Umbono: Ukuba ngumhlobo othenjiweyo wabathengi behlabathi. Ukuhambisa ixabiso eliphezulu kubathengi, abasebenzi kunye nabanini zabelo.
Umnqophiso: Ukubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu, ngexesha elifanelekileyo kunye nolwanelisayo kwimveliso ye-PCB nakwindibano.
I-Kingford ixhasa abathengi kwaye ibabonelele ngezisombululo ezizeleyo zenkonzo kuyo yonke imveliso yobomi bemveliso yeekhompyuter kunye neenkqubo. Sinazo zonke izakhono ezifanelekileyo kunye nobuchule bokucebisa abathengi kwimicimbi yolawulo lobuchwephesha, ukusukela ekusekweni kwenqanaba loyilo lwemveliso ukuya kuthi ga kwaye kubandakanya isigaba sokuphela kobomi bemveliso; kwaye sikwenza oko ngokusekelwe kweyona ndleko iyonke yobunini.
Oonobangela abaqhelekileyo bokubhomboloza ekutshintsheni umbane (2)
Yintoni inkqubo yemveliso Assembly PCB
I-Abstract: Kwinkqubo yemveliso yeNdibano ye-PCB, imveliso eninzi ...
Zithini izinto ezenziweyo zepcba?
Abstract: Iimpawu ezenziwayo zingabhekisa kwizinto ze-elektroniki ...
Yazisa ngophuhliso lweshishini le-smt kwindibano ye-SMT PCB
Abstract: Indibano ye-SMT ye-SMT ibizwa ngokuba yonyuka umphezulu okanye intaba ...
Yeyiphi imigaqo ekufuneka ilandelwe kwibhodi yekopi ye-pcb
Ukukhuphela i-PCB ngumsebenzi onzima kakhulu. Ukuba awukhathali ...
Zithini izigaba ezahlukeneyo zeebhodi zePCB?
I-Abstract: Ibhodi ye-PCB zizinto ezisisiseko, ezigqityiweyo zaqulunqwa ...
Ezinye iingcebiso zokuphucula ukusasaza kobushushu bePCB ngomboniso we-LED
Abstract: Ii-LEDs zinokubonwa kuyo yonke indawo, ke zithini iindlela f ...
Yeyiphi imigaqo-siseko ekufuneka iqatshelwe kuhlalutyo lwenkonzo ye-DFM?
1 | Ukuqhubekeka Inkqubo yokhetho ekhethiweyo kufuneka ibe ...
Izinto ezichaphazela uhlalutyo lwe-DFM kunye nendlela yokuzisombulula.
Injongo ye-DFM kukunciphisa iindleko zokuvelisa ngaphandle koku ...
Yintoni uyilo lweMveliso kwiNdibano yePCB?
Intshayelelo i. Uyilo lweMveliso: Namhlanje, umbutho ...
Ngaphezulu kwesihlandlo esinye siye sayalela ukuba kudityaniswe iibhodi zesekethe eziprintiweyo ukusuka kwi-KINGFORD Ukufakwa kwe-smd kunye nediphu. Ngalo lonke ixesha sifumana iibhodi ezikumgangatho ophezulu. Akuzange kubekho mtshato. Kuyonwabisa ngakumbi ukuba iodolo yayihlala izalisekiswa ngexesha. Yonke into ifike ngexesha, kwaye ngenxa yoko ixesha lakho elimiselweyo akufuneki ukuba limiswe elinye ixesha
Ukukhetha ikhontraktha, sigxile kumava nakwingcali yeqabane lethu elizayo. I-KINGFORD ihlangabezane ngokupheleleyo nolindelo lwethu ekuhleleni ukuthengwa kwamacandelo, ukuveliswa kwendibano yeebhodi zesekethe eziprintiweyo. Siyathemba ukuba enye intsebenziswano eneziqhamo!